Wasaaradda Maaliyadda oo maanta daah-furtay isticmaalka Miisaaniyadda 2019-ka – Kalfadhi
Xukumadda Soomaaliya ayaa maanta si rasmiya uga jartay xariga in Miisaaniyadda Qaranka ee 2019-ka uu isticmaalkeedu bilowday. Munaasabad ay Wasaaradda Maaliyaddu soo agaasintay, oo ka dhacday Muqdisho, ayaa lagu faah-furay isticmaalka Miisaaniyadda Dowladda ee sanadkan.
Sida ay qortay SONNA, Wasiirka Maaliyadda, Cabdiraxmaan Beyle, iyo Hanti-dhawrka Guud ee Qaranka, Maxamed Maxamuud Cali (Afgooye), ayaa sheegay in miisaaniyaddii sanadkii hore si fiican loo isticmaalay, tan sanadkanna ay rajeynayaan iney noqoto mid la mid ah ama ka hagaagsan.
Munaasabadda ay Wasaaradda Maaliyaddu u qabatay maanta daah-furka Miisaaniyadda 2019-ka waxa uu Wasiir Beyle ka sheegay iney Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) dadaal xoog leh ugu jirto in deymaha lagu leeyahay Soomaaliya laga cafiyo.
Miisaaniyadda ay DFS maanta daah-fureyso waxaa laba maalin gudahood (29-30 Diseembar, 2018) ku ansixiyey Golaha Shacabka, maalin kadibna waxaa saxiixay Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo).
Hase ahaatee, Golaha Aqalka Sare ayaa, sabab ay ugu weyn tahay inuusan wax ka meel-marin Miisaaniyadaha 2018 iyo 2019, waxa uu xiriirkii wada-shaqeenta ahaa ugu jaray Golaha Shacabka, taas oo uu xalkeedu hadda ag yaalo Madaxweyne Farmaajo, oo uu u soo gudbiyey Afhayeenka Aqalka Sare, Cabdi Xaashi Cabdullaahi.
Dad ay ka mid yihiin dhaqaalyahanno Soomaaliyeed ayaa qaba in ay halisteeda leedahay in, iyada oo uusan Baarlamaanku meel-marin Xisaab Xirka Miisaaniyaddihii uu isticmaalkooda ansixinayey, ay xukumaddu go’aansato in sanadkii yimaadaba ay baarlamaanka horkeento miisaaniyadda sanadka xiga.
Xisbiga UPD oo sheegay inuu Madaxweynaha KGS baajiyey aqoon-isweydaarsi uu ku qaban lahaa Baydhaba